Maamulka 'Israa'iil' Oo Dowladda Itoobiya Ka Taageeraya Dhanka Amniga.
Saturday March 24, 2018 - 10:14:43 in Wararka by Super Admin
Xilli qulqulatooyin siyaasadeed iyo kuwa amni ay ka jiraan wadanka Itoobiya ee dhaca geeska qaaradda Afrika ayuu maamulka wadankaasi ugacan haantiyay maamulka Yahuudda sahyuuniyadda ee xoogga ku heysta dhulalka muslimiinta Filasdiin.
Yahuudda ayaa sheegtay in dhan walba ay ka gacan siin doonto taliska xabashiga ah ee fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa kaasi oo wajahayo xaalad siyaasadeed oo aad u adag, Maamulka Yahuudda ayaa qorshaynaya in dhanka ammaanka iyo isgaarsiinta uu ka gacan siiyo dowladda Itoobiya si ay udamiso kacdoonka shacabiga ah ee ay wajahayso.
Safiirkiika Yahuudda ufadhiya magaalada Addis Ababa Ninka lagu magacaabao Rafaa'iil Mooraaf ayaa warbaahinta u sheegay in maamulkiisu uu dhanka Tiknaloojiyadda ka taageeri doono dowladda Itoobiya islamarkaana uu qarash ku bixin doono dhismaha biya xireenka Alnahda oo Itoobiya doonayso in ay ka dhigto biya xireenka koowaad ee ugu weyn qaaradda Afrika.
Wakaaladda wararka Rasmiga ah ee afka dowladda Itoobiya ku hadasha ayaa baahisay in 'Israa'iil' ay dhanka isgaarsiinta iyo biyaha xireenka wabiga Niil ka gacan siin doonto.
Safiirka Yahuudda ee Addis Ababa wuxuu xaqiijiyay in qalabka dhanka amniga iyo basaasnimada loo adeegsado ay ugu deeqday itoobiya islamarkaana tijaabadiisa ay hadda socoto, sanaddii lasoo dhaafay kooxaha mucaaradka wadankaas ayaa xaqiijiyay in qalab dadka lagu basaaso oo dhanka Yahuudda laga keeno lagu faafiyay gobollada Kacdoonnadu ka socdaan ee Oromia iyo Amhara.
R/wasaaraha Yahuudda Bin Yameen Netenyaahu ayaa sanaddii lasoo dhaafay socdaal ku tagay wadamo ay kamid yihiin Uganda, Kenya iyo Itoobiya waxayna Yahuuddu ballan qaaday in dowladahaasi ay kala shaqeynayso ladagaallanka waxa loogu yeero argagaxisada oo loola jeedo muslimiinta.
Shirkado calooshood u shaqeystayaal yahuud ah ayaa ku sugan Bariga Afrika iyagoo ciidamada dowladaha saliibiyiinta kala shaqeeya duullaanka lagu haayo muslimiinta.
Yabooha taageero ee Yahuudda ka yimid ayaa imaanaya xilli lix bilood xaalad degdeg ah lagusoo rogay Itoobiya kadib markii uu iscasilay R/wasaarihii wadankaas Hailla Maryan deseleng waxaana talada gacanta ku haya ciidamada Melleteriga.